लुटिएको गहना भेटिएपछि ९५ वर्षीया असली भन्छिन् : ‘चुँडिएकै कानको लोतीमा लगाउँछु’ - वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
'हाम्रा मान्छेहरुले मास्टर मात्र देखे, लठ्ठीले कुट्दै पढाउने मास्टर हाम्रा मानिसका लागि ठूलो भयो । मेरो बुवा मलाई मास्टर बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो । आज नाटक सिकाउने मास्टर भइहालें त'
असार ७, २०७९ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — 'तपाईंलाई विराटनगरमा सुशीला कोइराला नाटकघर खुल्यो भन्ने थाहा छ ?' हिरा बिजुलीले कुराकानीको सुरुमै प्रश्न गरे । प्रश्नको जवाफ फर्काउन नपाउँदै गम्भिर भावमा उनैले जवाफ दिए, 'हामीले पनि मुगुमा नाटकघर बनाउने लक्ष्य राखेका थियौं । सुशीला कोइराला नाटकघरसँगै देखेको हाम्रो सपना अझै पूरा भइसकेको छैन ।'
खासमा २०६४ मा स्थापना भएको 'कर्णाली कला केन्द्र'को एउटै उद्देश्य थियो– मुगुमा नाटकघर बनाउने । त्यतिबेला संस्थाका अध्यक्ष थिए निर्देशक मीन भाम, उपाध्यक्षमा हिरा । थिएटरतिर सक्रिय मीनले त्यतिबेलै हो हिरालाई नाटकमा आवद्ध हुन हौस्याएका । हिरासहित कर्णालीका १२ र विराटनगरका १२ जनालाई गुरुकुलमा सुनील पोखरेलले नाटक सिकाए । त्यसपछि मञ्चन भयो, 'कर्णाली दख्खिन बग्दो छ' । पहिलोपटक नाटकमार्फत काठमाडौंमा मानिसहरुले कर्णालीलाई देखे । नाटकबाट उठेको रकम थिएटरमै प्रयोग गर्ने योजना बन्यो । तर, त्यसबीच गुरुकुल बन्द भयो । नाटकघर बनाउन गुरुकुलले पनि सहयोग गर्ने कुरा थियो । संस्था छोडेर मीन फिल्मतिर लागे । मुगुमा नाटकघर बनाउने सपना त्यतिकै रह्यो ।
संस्थाका अगुवाले छोडिसकेपछि २०६५-०६७ तिर हिराले 'कर्णाली कला केन्द्र'को नेतृत्व गर्न तम्सिए । 'कर्णाली दख्खिन बग्दो छ'पछि हिरा नाटकतिरै भिज्न थाले । 'कर्णाली दख्खिन बग्दो छ'को चर्चा चुलिरहँदा सोचे- 'मलाई यहाँ पुर्‍याउने त मेरो भाषा, माटो र रोदन हो ।'
'त्यही दुःख, त्यही असफलता । खाद्यन्न र चामलका लागि पाँच दिनु कुर्नुपर्ने समस्यालगायतका कुराहरु त हाम्रा साहित्य रहेछन् । यी कुराहरुलाई नयाँ तरिकाले देखाउन सकिन्छ भनेर म मुगु फर्किएँ,' झन्डै १२ वर्षअघिको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, 'मुगुमा गएर संस्थाको काम गर्छु भन्ने थियो । समाज पनि बुझ्नुथियो । त्यहाँ पुगेपछि स्टोरी टेलिङको कार्यक्रम गर्‍यौं सुरुमै ।'
राजधानीमा अनेकन सम्भावना हुँदाहुँदै मुगु फर्किएका हिरासँग त्यतिबेला ३० वर्षको दर्शन थियो । ‍सुरुका १० वर्ष कर्णालीका मुगु, वरपरका जिल्लालाई नाटक देखाउने, नाटकको माहोल बनाउने । सुरुवातका दिनमा धेरैले उनीहरुलाई जागिर छाडेर के नाटक गरी हिँडेको भन्दै कुरा काट्थे । महिलाहरु परिवारका डरले नाटकमा सहभागी हुन्थेनन् । करिव ३५ सय नाटक प्रस्तुत गरिसकेपछि भने मुगुमा नाटकको माहोल बनाउन सफल भएको दाबी गर्छन् हिरा ।
मुगु, हुम्ला र कालिकोट । नाटक लिएर उनीहरु कहाँ मात्रै पुगेनन् । नेता भोट माग्न नपुगेको ठाउँहरुमा हिराको समूह नाटक देखाउन पुग्यो । मुगु र हुम्लाका बीचमा पर्ने गाउँ, त्यस्तै मुगु र बाजुराका बीचमा भएका गाउँसम्म पुग्न २ दिन हिँड्नुपर्थ्यो । त्यहाँसम्म पुग्नुको एउटै उद्देश्य थियो– प्रश्न गर्ने समाजको निर्माण ।
'हाम्रो समुदायका मानिसले प्रश्न गर्नुपर्छ । राज्य, सामाजिक कुप्रथा, सामान्य अन्यायको विरुद्धमा प्रश्न गर्न सिकाउँछौं हामी । पुल दियो, पीच गरिदियो भनेर आनन्दले बस्ने मानिसहरु हामी चाहँदैनौं । निरन्तर प्रश्न गर्ने मानिस, धर्म संस्कृतिमाथि पुनर्विचार गर्नलाई पनि हामी सिकाउँछौं,' हिरा सुनाउँछन्, 'हामी केही दिन रिहर्सल गर्थ्यौं । हामीले उठाएको विषय दर्शकको पहुँचमा यसरी पुर्‍याउँछौं कि उहाँहरुलाई हामी लेकबाट बेसी झर्नुस् भन्दैनौं । हामी घर-घरै गएर नाटक देखाइदिन्छौं । हामीले नाटकलाई जनताको पहुँचमा पुग्ने सूचनाका रुपमा प्रयोग गर्‍यौं । कागले पत्ता लगाएको गाउँ भन्ने स्थानहरुमा हामी पुगेका छौं ।'
हिरालाई थाहा थियो, 'जति राम्ररी आफ्नो समुदायको कथा भन्न सकिन्छ अन्य समुदायका मानिसले त्यो भन्नै सक्दैन ।' कथ्य शैलीमा, यो सशक्त पाटो पनि हो । त्यसैले हिराको समूहले आफ्नो भिजनको पहिलो १० वर्षमा कर्णालीका स्थानीय कथा, भाषामा मौलिक कथा मञ्चन गरे । स्थानीय स्वादका कथा पस्किरहँदा उनीहरुको प्राथमिकतामा दलितका र महिलाका विषय परे । काठमाडौंसम्म आइपुगेको नाटक 'गर्भ छिटा'ले कर्णालीको ठकुरी समाजमा रहेको 'गर्भ छिटा' प्रथाले महिलामाथि कस्तो दमन गरेको छ भन्ने विषय उठाए । पत्नी सुस्केरी हुँदा दुई कुटुम्बले मन्दिरमा पुगेर कसरी सम्धी बन्ने भाका गर्छन् भन्ने कथालाई धेरैले मन पराइदिए ।
'राष्ट्रिय नाटक महोत्सव'मा देखाइएको 'पम्फा फूल'मा दाइजो प्रथाको विषय समेटिएको थियो । कर्णाली कला केन्द्रले त्यससँगै जलवायु परिवर्तनलगायत आममानिसका अन्यायका विषयलाई उठाउँदै नाटक गर्‍यो । मुगुमा काम गर्न सजिलो पक्कै थिएन । 'हामीले जायज कुरा उठाउँदा पनि त्यहाँको सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक संयन्त्र हाम्रो पक्षमा छैनन् । मुगुमा लोकबाजा महोत्सव आयोजना गर्छुभन्दा जात बाधक भइदिन्छ । एउटा दलितले सुरु गरेको संस्था भइदिएकाले उनीहरुले पैसा दिँदैनन्,' दुःख केलाउँदै जाँदा हिराको अनुहार अँध्यारियो, 'हामी राजनीतिक तहमा नपुगुञ्जेलसम्म स्रोत र साधनको सहयोग हामीले पाउँदैनौं जस्तो लाग्छ । मुगुमा हाम्रो लागि असहज परिस्थिति छ । आर्थिक स्रोतमा त्यस्तै छ । राजनीतिक दाउपेच पनि छ । त्यहाँ मैले पार्टीको झण्डा ओढिदिनुपर्छ । त्यो झण्डा ओढ्ने मेरो आदत छैन ।'
२०६८ को एउटा घटना सम्झन्छन् हिरा- त्यतिबेला साहित्य र रेडियोमा रुची राख्ने एक पार्टीका व्यक्तिलाई एउटा कार्यक्रममा बोल्न लगाइएको थियो। अन्य पार्टीका मानिसहरुले आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधि कोही नबोलाएको भन्दै कार्यक्रम बिथोलिदिने धम्कीसमेत दिए । निरन्तर दलितका विषय मात्र नभइ आममानिसका सामाजिक न्यायका लडिरहँदासमेत मुगुका नगरपालिकाहरुले आफूहरुलाई नदेखेको हिराको गुनासो छ ।
'हामी दलितका विषयमा मात्र नबोलिकन आम मानिसको सामाजिक न्यायका लडेका हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय दर्नाल अवार्ड पायौं,' अवार्ड थाप्न काठमाडौं आएका हिराले हामीसँग गफिँदै भने, 'अवार्डले अलिकति उत्साह र जिम्मेवारी बढ्यो । हामी निरन्तर लाग्ने, बहस गरिरहने समूह हौं । एकोहोरो तरिकाले काममा हामी लाग्यौं । हामीले गरिरहेका कामको महत्त्व पनि रहेछ भन्ने भयो । तर अरुले अवार्ड दिइरहँदा मुगुको नगरपालिकाले हामीलाई किन देखेन ?'
अहिले 'कर्णाली कला केन्द्र'ले सबै अप्ठेरो परिस्थितिहरुको सामना गर्न सिकिसकेको छ । छोरीहरुलाई नाटकमा पठाउन नमान्ने अभिभावक अहिले कर्णाली कला केन्द्रको कामबाट प्रभावित बनेकोमा उनी दंग पर्छन् । 'अहिले हाम्रो गाउँतिर नाटक देखाउन आउनु न भन्नेहरु बढेका छन् । हाम्रो टिम बढेको छ । अहिले १६/१७ जनाको टिममा आधा त महिला नै छन् । कोही भिडियोमा काम गर्छन् । कोही नृत्यमा एकदमै राम्रा । सक्षम महिलाहरु हुनुहुन्छ,' उनले भने ।
विगत १२ वर्षमा उनीहरुले मुगुमा नाटक हेर्ने दर्शक बनाएका छन् । कलाकारलाई बचाउन अब दर्शकले 'टिकट काटिदिनुपर्छ' भन्ने कुराको विकास गर्न उनीहरु सुर्खेत झरेका छन् । 'समुदायले कलाकारलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सोचसहित अब हामीले निश्चित रकमको टिकट किनेर कलाकारको काम दर्शकले हेर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित सुर्खेतमा हल बनाउँदैछौं । यतिका वर्ष हामीले लगानी गरेको शिप, समय अनि लगानी अब दर्शकले फिर्ता गर्नुपर्छ,'हिराले आगामी १० वर्षको योजना सुनाए ।
हिराका अनुसार उनीहरु सुर्खेतका मानिसहरुलाई प्रश्न गर्न सिकाउन कर्णालीको राजधानी आइपुगेका हुन् । सुर्खेतमा थिएटर बनाउने योजना छ । उक्त थिएटरलाई सामुदायिक 'स्पेश'का रुपमा प्रयोग गरिने हिराको भनाई छ । 'काठमाडौंका मानिसहरुले झैं पैसा मात्रै कमाउनकै लागि त्यो हल प्रयोग गर्नेछैनौं । तर, समुदायको आम विषयको बहस, पैरवी गर्ने ठाउँ बनाउने छौं । जहा फरक-फरक मानिसहरुले आफ्नो विषयहरु राख्न पाउनेछन्,' ३२ वर्षिय हिराले भने,'नीति निर्माणका तहका व्यक्ति र पीडितहरुलाई त्यहाँ राखेर छलफल गराउने संचार गर्ने स्थान बनाउँछौं । नाटक मात्र नभएर कलाका बहुआयमिक आयमहरु समेट्नेछौं । सुर्खेतमा प्रश्न गर्ने वातावरण मर्‍यो । हिजोदेखि प्रश्न नहुने ठाउँ हो सुर्खेत । अब सुर्खेतलाई प्रश्न गर्न सिकाउँछौं ।'
पत्नी विष्णुमाया परियार, ९ वर्षिय छोरासहित हिरा मुगुबाट सुर्खेत झरेका हुन् । सुर्खेत आउनुको अर्को कारण छ – टिमको रोजीरोटी । 'टिमको नेतृत्व गरिरहँदा साथीहरुको जिविकोपार्जनको सवाल मेरो टाउको माथि छ । हामीले सुरुदेखि आजसम्म दुई सयजनासँग काम गर्‍यौं । तर उहाँहरु अहिले हामीसँग हुनुहुन्न । त्यो कुराको उत्तर मसँग छ,' गम्भिर भावमा उनले सुनाए, 'त्यो प्रश्नको उत्तरमाथि अहिले हामी काम गरिरहेका छौं । हाम्रो महिनामा तलब छैन । बालबालिकालाई पढाउनै पर्‍यो । मुगुमा नाटक देखाएर उहाँहरुको रोजिरोटी पुग्दैन । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा मलाई त्यता बस्दा समस्या छैन । म पैसा नकमाउन जन्मेको हुँ । कथमकदाजित खानु चाहिँ पर्छ भन्ने लाग्छ । म अरुलाई म जस्तै जोगी बनाउन चाहँदिन ।'
सुर्खेतमा १० वर्ष बिताइसकेपछि कर्णाली कला केन्द्रले बाँकीका १० वर्ष अनुसन्धानमा बिताउने योजना बनाएको छ । कर्णालीका कलाको डिजिटल अर्काइभिङलाई उनीहरुले विशेष महत्त्वमा राखेको छ । त्यसपछि हिरालाई फिल्म मेकिङमा लाग्नु छ । हुन त बुवा हिरालाई मास्टर बनाउन चाहन्थे । कलामार्फत प्रश्न गर्न सिकाउने कर्णालीका हिरा नाटक सिकाउने मास्टर बनेकोमा सायद उनलाई गुनासो छैन ।
'हाम्रा मान्छेहरुले मास्टर मात्र देखे, लठ्ठीले कुट्दै पढाउने मास्टर हाम्रा मानिसका लागि ठूलो भयो । बुवा मेरो छोरालाई मास्टर बनाउछु भन्नुहुन्थ्यो । आज नाटक सिकाउने मास्टर भइहालें त,' उनले भने ।
प्रकाशित : असार ७, २०७९ १७:३५